Nagu saabsan - Shenzhen M -Queen Electronics Co., Ltd.
M-Queen Electronics waxay ku takhasustay samaynta bangiga korontada, xeedho bilaa wireless ah, USB flash drive iyo qalabka ciyaarta. Waxay ku hawlanayd soo saarista elektaroonigga macaamiisha ee qiimaha & hadiyadaha muddo 17 sano ah tan iyo 2004. M-Queen waxay qaadataa qalabka wax-soo-saarka & farsamaynta iyo nidaamka maareynta oo aad u firfircoon si ay ugu adeegto macaamiisha caalamiga ah qiimo aad u hooseeya iyo tayo hufan. Si looga caawiyo macaamiisha bixinta adeegyada elektiroonigga ah ee macaamiisha ee tayada leh, M-Queen waxay bixisaa xal hal joogsi oo kharash-ku-ool ah laga bilaabo fikradda ilaa gaarsiinta.
In elektiroonigga macaamiisha, isbeddellada suuqgeynta ayaa ah wax walba. Taasi waa sababta, marka aan joogno M-Queen, waxaa naloo kaxeynayaa inaan si joogto ah u daba galno xitaa heerar sare oo tayo leh. Ku tiirsanaanta hal-abuurnimada joogtada ah iyo awooda wax-soo-saarka oo xoog leh, naqshadaha M-Queen, waxay horumarisaa, baartaa, soo saartaa oo urursataa bangi kasta oo koronto ah, xeedho bilaa wireless ah, USB flash drive iyo mashaariicda qalabka ciyaarta, kaas oo soo saarta sida saxda ah ee ay macaamiishu ku talagasho, waxay u abuurtaa iyadoo loo eegayo macaamiisha baahiyaha gaarka ah iyo heerarka adag ee guriga dhexdiisa.
Markaan joogno M-Queen, kuma bixinno oo keliya badeecooyin qiimo sare leh, laakiin waxaan ka shaqeynaa aqoon xirfadeed si aan miiska u soo saarno wax dheeraad ah-isha wax aan la filayn, oo ah waxyi dhiirrigelin leh. Waa sixirka awood u leh inuu soo jiito macaamiisha adduunka oo aan si joogto ah u horumarino nafteena.
M-Queen waxay hadda samaysay aqoon-is-weydaarsi wax-soo-saar oo casri ah kaas oo daboolaya baaxad ka badan 5,000 mitir oo laba jibbaaran, waxay qaadataa heerka qalabka wax-soo-saarka farshaxanka iyo farsamaynta si ay ula jaanqaaddo bangigii ugu dambeeyay ee korontada, xeedho bilaa wireless ah, USB flash drive-ka iyo adeegyada qalabka ciyaarta, halka kooxdayada kartida leh ku faraxsan inaad noqoto lammaanahaaga, waxay siisaa nidaam xigasho onlayn ah oo si sahlan loo adeegsan karo taasoo hubinaysa jawaab-celinta waqtigeeda ee iibsadayaasha caalamiga ah.
Weligaa ha ka daahin inaad ogaato, ku biir M-Queen si aad u hesho khibrad wanaagsan. Waan ognahay sida adag ee aad u shaqeyso, aan wax ka qabanno madax -xannuunka bixinta alaab tayo leh, markaa waxaad xoogga saari kartaa waxaad sida ugu fiican wax u qabato.
Waa kuwan qaar ka mid ah sababaha noo doortay:
1. Xulasho balaadhan oo ah alaabta durugsan ee guurguura, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn baanka korontada ee kala duwan, xeedho bilaa wireless, USB flash drive iyo qalabka ciyaarta.
2. M-Boqoraddu waxay si adag u fulisaa heerar taxane ah oo tayo leh, tusaale ahaan CE, FCC, RoHS, UL, ETL iyo ISO iwm, oo ay sidoo kale shahaado ka heleen SGS iyo tiirka Sedex 4.
3. Muunado bilaash ah ayaa la heli karaa.
4. Badeecadaha had iyo jeer waa la hubiyaa 100% ka hor baakadaha.
5. Oggolaanshaha dalabka tirada yar, waqtiga gaarsiinta degdegga ah ee amarka habboon.
6. Khibrad u leh la macaamilka macaamiisha waaweyn ee Waqooyiga Ameerika iyo Yurub.
Maxaad Si Wadajir Ah Ugula Shaqayn Lahayd M-Queen Electronics?